Trump oo ka baaraandagaya eryidda ninka hogaaminaya baaritaanka Ruushka - BBC News Somali
13 Juunyo 2017
Image caption Muller waxaa weeraray qaar ka mid ah muxaafidka
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa ka baaraandagaya in uu shaqada ka eryo garyaqaanka madaxa bannaan ee dusha kala socda baaritaanka lagu hayo eedaymaha sheegaya in Ruushka farogaliyay doorashadii Maraykanka ee sannadkii hore, sida uu sheegay saaxiibkii.
Qaar ka mid ah xubnaha xisbiga talada haya ayaa dhawaan weeraray sumcadda Robert Mueller, iyaga oo Trump ugu baaqay in uu dib u eego doorka ninkan.
Christopher Ruddy oo ay wakhti dheer saaxiibo ahaayeen Trump ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ka baaraandagayo shaqo ka fariisinta dacwad oogahan madaxa bannaan.
Laakiin Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka ayaa sheegay in Trump uusan marna arrintaas la falanqaynin Ruddy.
Mueller waxaa magacaabay ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka si uu dusha ugala socdo baaritaanka ay waddo waaxda cadaaladda ee dalka Maraykanka, wuxuuna hadda billaabay in uu xusho xubnihii la shaqayn lahaa oo badankood ay yihiin khabiirro ku takhasusay shuruucda dambiyada.
Dacwad ooge shaqada laga eryay 'markii uu taleefoonka ka qaban waayay Trump'
Haddii ay xaqiiqo noqoto shaqo ka cayrintani waxay keeni kartaa fasiraado xoog badan waxayna soo cusboonaysiin kartaa dhaleecayntii Donald Trump, oo caddaadis xoogleh kala kulmay shaqo ka cayrintii uu ku sameeyay agaasimihii hore ee Hay'adda Sirdoonka ee dalka Maraykanka James Comey.
Image caption Eryitaanka Comey ayaa sababtay in Trump lagu eedeeyo in uu isku dayayo in uu carqaladeeyo baaritaanka lagu hayo Ruushka